Sajhasabal.com | Homeदिशै दिशाका बिच मुगु लाई खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घोषणा
बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्देशन
वडा कार्यालय नसार्न अन्तरिम आदेश
भारतीय भन्सारले पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका १४० वटा ट्याङ्कर नाकामै रोक्यो
आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर: कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् सुचिसहित
प्रधानमन्त्रीद्वारा १० हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन
नन्द बहादुर रोकाया |
जेठ २९, मुगु | सोमबार तामझामका साथ मुगु जिल्ला लाई ५५ औ जिल्लाका रुपमा खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घोषण गरीयो । कोई तामाझामाका साथ घोषाण सभामा सहभागी भएका देखिन्थे भने कोहि कसरी मुगु जिल्ला लाई खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घोषण गरेका हुन भन्ने कुराको अलमलमा परेका थिए ।
कोहि भने कसरी मुगु लाई खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घमेषणा गरेका हुन भन्ने सोचमा समुह बनाई गन्थन मन्थन गदै गरेका थिय । जिल्ला लाई खुल्ला दिशा मुत्त बनाउन सहभागी भएका भन्दा ,त्यस्को विरोध र कुरा गर्ने सदरमुकाम गमगढीमा धैरै भेटिए । त्यस पछी म कार्यक्रम स्थल भएको स्थलमा गहे तर घोषण सभाको औपचारीक कार्यक्रम को आयोजना गरीएको स्थल माहाकाली मााध्यामिक बिद्यालयको वरीपरीनै दिशा र पिसावले भरीएको देखे । सदरमुकाम जस्तो ठाउँमा दिशै दिशा छ भने गाउँघरको हालत के होला यो प्रस्ट बुझन्न सकिन्छ र्। राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ अनुसार राष्ट्रलाई खुल्ला दिसामुक्त देश बनाउने लक्ष्यअनुरुप आज मुगु जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरियो खुल्ला दिशा मुक्त घोषण गरिने अधिकांस सरोकारवाल निकायलाई जानकारी नदिई हतारमा खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घोषण गरेको अधिकांसको बुझाई छ ।
मुगु जिल्लका गाउँमा दिशै दिशा र पिसावले देर्गन्धि छन । सदरमुकमा गमगढीमा सार्वजानीक शौचालय छैनन् । बाहिर बाट सदरमुकमा गमगढी आउने स्थानीयले जथावाभि दिशापिसा गर्ने गरेका छन । सदरमुकमा जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रपनी दुर्गन्धित छ । यस्तो अबस्थामा पनी जिल्ला लाई खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घोषण गर्नु जिल्लाले लाजमर्दो काम गरेको स्थानीयको भनाई छ । मुगु लाई यस अघिका बर्षमा पनी बारम्बर खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घोषण गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनी त्यो सफल हुन सकेन । साविकका २४ गाविस नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएका छन । तर गाउँमा मा जादाँ दिशै दिशा देख्न सकिन्छ गाउँ घरका स्थानीय घरमा चर्पि भएको भएपनी चर्पि भित्र दिशा पिसा गर्न हिचकिचाउछने गर्दछन । उनिहरु खुल्ला ठाउँमा नै दिशा गर्ने गर्दछन । गाउँमा चर्पि छन भत्तिकिएका छन, पानी अभावले स्थानीयले चर्पि प्रयोग गर्नुको सटा घांस दाउरा राख्ने गरेका गोठ बनाएका छन । बरु पानी अभावमा खुल्ला ठाउँमा दिशा पिसाव गर्न बाध्य छन । जिल्ला खानेपानी कार्यलय मुगुको तथ्याङ्गमा ८० प्रतिशत खानेपानीको पहूचमा रहेका देखिन्छ ।
तर १० प्रतिशत मानीसले राम्रो संग पानी खान बाध्य भएका छन । अझै पनी नदि आसपासका स्थानीय कर्णालीको धमिलो पानी खाई । रहेका छन ।मुगुमा १० हजार ७ सय ३९ घर परिवार छन् । जसमा ९७.५ प्रतिशत आफ्नै चर्पी भएका छन भने २.५ प्रतिशत साझेदार रूपमा चर्पी भएका छन् भन्ने कुरा जिल्ला खनेपानी स्वस्छता समितिको कागज मा मात्र सिमित छ । यो कुरा गाउँ घरमा लागु भएको छैन । मुगु लाई पछी पार्ने मुगुका स्थानीय भन्दा बाहिर बाट आउने कर्मचारी छन भन्ने कुरा मुगालीले बुझिसकेका छन ।
बाहिरबाट आउने कर्मचारीको मातहतमा मुगु चलेको छ । मुगुका नेता भनाउदाँ बुद्धि नभएका अर्काको कुरा सुन्ने मात्र भएकाले आज मुगु जिल्लाको दुरदर्शा लागेको जानकाहरुको भनाई छ । जो मान्छे मै हु भन्छन उसको घरमा चर्पि छैनन । मुगु जिल्ला लाई कागजमा खुल्ला दिशा मुक्त जिल्ला घोषण गरियो कि ब्याहारमा । यो कुरा केहि हप्ता तथा महिना पछी देखिने पक्का छ ।
होली नखेले बिहे रोकिन्छ र ?
विप्लवमाथि प्रतिबन्ध, सिके राउतलाई अंगालो !